जेठ २२, २०७७ ०४:३१:४१
माघ २, २०७५ बागमती खबर
तीन नंम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको ११ महिना पुगेको छ । ११ महिनामा प्रदेश सरकारले बनाउने नियमावली र कानुनहरु निर्माण गरिएको छ । यस प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयमा कर्मचारी देखि मन्त्री सम्मले काम पनि गरिरहेका छन् । तर प्रदेशभरका नागरिकले भने प्रदेश सरकारले गरेका कामको अनुभुति भने अझै लिन पाएका छैनन् ।
अझै प्रदेश राजधानी कहाँ हुने र नामाकरण कहिले हुने भन्ने चिन्ता पनि त्यतीकै छ । राजधानी तोक्ने काम अझै सम्म पनि हुन सकेको छैन । अब हुने अधिबेशनको सुरुवातमा हुन्छ भनेर सबैले अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
राजधानी र नामाकरणको काम राजनितिक सहमतीमै हुने भनेर सबै पार्टिका संसदिय दलका नेताभनिरहेका छन् । तर सहमती भने जुट्न सकेको छैन । तीन नंम्बर प्रदेशको राजधानी र नामाकरण कहिले सम्म हुन्छ त ? सरकारको अहिले सम्मको प्रगति के ? प्रदेशमा बिधुतिय बस कहिले बाट संचालन हुन्छ ? भनि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सोधेका छौं ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, माघ २, २०७५, ०८:०१:००
पुष १३, २०७५ बागमती खबर
मकवानपुर प्रशासनको निर्णयले हावा खायो, नाकामा छैन कडाई , बजारमा थेगीनसक्नुको भिड जेठ २२, २०७७ 569